सिलिकाको अल्ट्रासोनिक फैलाव (SiO2) - हिल्सचर
सिलिका, जसलाई सिओ २, नानो-सिलिका वा माइक्रो-सिलिका पनि भनिन्छ, टुथपेस्ट, सिमेन्ट, सिंथेटिक रबर, उच्च प्रदर्शन पोलीमर वा खाद्य उत्पादहरूमा बाक्लो, विज्ञापनकर्ता, एन्टि-केकि agent एजेन्ट, वा सुगन्ध र स्वादका लागि वाहकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तल तपाईं नानोसिलिका र माइक्रोसिलिकाको प्रयोगहरू र अल्ट्रासोनिक्सको सोनोमेक्निकल प्रभावहरूले कसरी सिलिका निलम्बन वा सिलिका नानो पार्टिकल संश्लेषणमा सुधार गरी प्रक्रिया दक्षता र अन्तिम उत्पाद प्रदर्शनमा सुधार गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
सिलिका फैलाव / सिलिका सस्पेंशन / नानो सिलिका (SiO2)
सिलिका हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक फारमहरूको विस्तृत श्रृंखलामा उपलब्ध छ र केहि नानोमिटरसम्म केही माइक्रोमिटरको अत्यन्त राम्रो कण आकार छ। सामान्यतया सिलिका भिजेपछि राम्रोसँग तितरबितर हुँदैन। यसले उत्पाद सूचिमा माइक्रोबब्लल्स पनि थप गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेसन माइक्रो-सिलिका र नानो-सिलिका फैलाउन र विघटन ग्यास र माइक्रो-बबलहरू गठनबाट हटाउनको लागि एक प्रभावकारी प्रक्रिया टेक्नोलोजी हो।
फ्यूमेड सिलिकाको अल्ट्रासोनिक फैलाव: हिल्सचर अल्ट्रासोनिक होमोजिनिजर UP400S ले सिलिका पाउडर छिटो र कुशलतापूर्वक एकल, मोनो-फैलाउने, नानो-कणहरूमा फैलाउँछ।
UP400S अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजरको प्रयोग गरेर पानीमा फोमेड सिलिसियाको अल्ट्रासोनिक फैलाव
न्यानो साइज वा माइक्रो साइज सिलिकाका धेरै अनुप्रयोगहरूको लागि, एक राम्रो र एक समान फैलावट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्राय: मोनो-फैलाउने सिलिका निलम्बन आवश्यक पर्दछ, जस्तै कण आकार मापनका लागि। स्क्र्याच प्रतिरोध क्षमता सुधार गर्न स्याही वा कोटिंग्स र पोलीमरमा प्रयोगको लागि, सिलिका कणहरू धुंधबाट बच्न र पारदर्शिता कायम राख्न दृश्यात्मक प्रकाशमा हस्तक्षेप नगर्न पर्याप्त साना हुनु पर्छ। धेरै कोटिंग्सका लागि सिलिका कणहरू यस आवश्यकता पूरा गर्न n०nm भन्दा सानो हुनु आवश्यक छ। अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि, सिलिका कण समुच्चयले वरिपरि मिडियासँग अन्तर्क्रिया गर्न प्रत्येक व्यक्तिगत सिलिका कणलाई बाधा पुर्‍याउँछ।
अल्ट्रासोनिक होमोजीनाइजरहरू फैलाउने सिलिकामा अन्य उच्च-शियर मिक्सिंग विधिहरू जस्तै रोटरी मिक्सर वा ट्या tank्क आन्दोलनकारीहरू भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन्। तलको चित्रले पानीमा फोमेड सिलिका फैलाउने अल्ट्रासोनिकको विशिष्ट परिणाम देखाउँदछ।
पानीमा फोमेड सिलिकाको अल्ट्रासोनिक फैलाव
सिलिका आकार घटाउने मा दक्षता प्रसोधन गर्दै
न्यानो-सिलिकाको अल्ट्रासोनिक फैलाव अन्य उच्च कतराहरू मिक्स गर्ने विधिहरू जस्तै IKA अल्ट्रा-टुर्राक्स भन्दा उत्कृष्ट छ। अल्ट्रासोनिक्सले सानो सिलिका कण आकारको निलम्बनहरू उत्पादन गर्दछ र अल्ट्रासोनिकेसन अधिक ऊर्जा कुशल टेक्नोलोजी हो। पोहल र शुबर्टले पानीमा एरोसिल (० (२% डब्लुईटी) को कण आकार घटाउनलाई अल्ट्रा-टुरैक्स (रोटर-स्टेटर-प्रणाली) को साथ हिल्सचर UIP1000hd (१kW अल्ट्रासोनिक उपकरण) को तुलना गरे। तलको ग्राफिकले अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाको उच्च परिणामहरू देखाउँदछ। उनको अध्ययनको नतीजामा पोहलले निष्कर्ष निकाल्यो कि "स्थिर विशिष्ट ऊर्जामा ईभी अल्ट्रासाउन्ड रोटर-स्टेटर-प्रणाली भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।" उर्जा-प्रभावकारिता र सिलिका कण आकार एकरूपता उत्पादन प्रक्रियामा अत्यधिक महत्त्वको हुन्छन्, जहाँ निर्माण लागत, प्रक्रिया क्षमता र उत्पाद गुणस्तर पदार्थ।
सिलिका फैलावको लागि अल्ट्रासोनिक्स बनाम अल्ट्रा टुर्याक्स
तलका चित्रहरूले नतीजा देखाउँदछ कि पोहलले सिलिका स्प्रे फ्रीज ग्रेन्युलहरू सोनीकेटिंग गरेर प्राप्त गरेको थियो। (विस्तार गर्न छविहरूमा क्लिक गर्नुहोस्!)
(बायाँ: sonication पहिले, दायाँ: sonication पछि)
कृपया तलका फारम प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाई सिलिका को फैलावटमा अल्ट्रासाउन्ड प्रयोगको बारेमा थप जानकारी अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने। हामी तपाईंलाई एक अल्ट्रासोनिक प्रणाली प्रस्ताव गर्न खुसी हुनुहुनेछ।
सिलिका भनेको के हो (SiO2, सिलिकॉन डाइअक्साइड)?
सिलिका सिलिकॉन र अक्सिजन रसायनिक सूत्र SiO2, वा सिलिकॉन डाइअक्साइडको साथ बनेको एक रासायनिक यौगिक हो। त्यहाँ सिलिकाका बिभिन्न प्रकारहरू छन्, जस्तै फ्युज गरिएको क्वार्ट्ज, फ्युमेड सिलिका, सिलिका जेल, र एरोजेलहरू। सिलिका धेरै खनिजहरूको मिश्रण र कृत्रिम उत्पादको रूपमा अवस्थित छ। सिलिका प्राय जसो प्रकृतिमा क्वार्ट्जको रूपमा र बिभिन्न जीवहरूमा पाइन्छ। सिलिकन डाइअक्साइड क्वार्ट्जको खनन र शुद्धिकरणबाट प्राप्त गरिन्छ। आकारहीन सिलिकाका तीन मुख्य रूपहरू पाइरोजेनिक सिलिका, प्रेसिजेटेड सिलिका र सिलिका जेल हो।
फ्यूमेटेड सिलिका / पायरोजेनिक सिलिका
अक्सिजन युक्त हाइड्रोजन फ्लेममा सिलिकन टेट्राक्लोराइड (SiCl4) जलाउँदा SiO2 को धुवाँ उत्पन्न गर्छ – Fused सिलिका। वैकल्पिक रूपमा, क्वार्ट्ज बालुवालाई 000००० डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक चापमा वाष्पीकरणले फ्यूमेट सिलिका पनि उत्पादन गर्दछ। दुबै प्रक्रियाहरूमा, आकारहीन सिलिका फ्यूजको परिणामस्वरूप माइक्रोस्कोपिक बूँदाहरू शाखा, जस्ता, तीन-आयामी माध्यमिक कणहरूमा फ्यूज गर्दछ। यी माध्यमिक कणहरू त्यसपछि सेतो पाउडरमा एकत्रित हुन्छन् अत्यधिक कम थोक घनत्व र धेरै उच्च सतह क्षेत्रको साथ। गैर-झरझराइएको फ्युम सिलिकाको प्राथमिक कण आकार an an० एनएम बीच हुन्छ। फ्यूमेड सिलिकाको धेरै शक्तिशाली गाढा प्रभाव छ। तसर्थ, फ्यूमेटेड सिलिका सिलिकन ईलास्टोमरमा फिलरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र पेंट्स, कोटिंग्स, चिपकने, प्रिन्टिंग मसी वा असंतृप्त पॉलिएस्टर रेजिनमा भिजोसिटी समायोजन। फ्युमेटेड सिलिकालाई जैविक तरल वा जलीय अनुप्रयोगहरूका लागि यसलाई हाइड्रोफोबिक वा हाइड्रोफिलिक बनाउन उपचार गर्न सकिन्छ। हाइड्रोफोबिक सिलिका एक प्रभावी डिफोमर घटक (एन्टी फोमिंग एजेन्ट) हो।
अल्ट्रासोनिक डीगस्सि deg र डिफोमिamingको बारेमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
फ्यूम गरिएको सिलिका सीएएस नम्बर ११२ 45 .45--5२--5
सिलिका फ्यूम / माइक्रोसिलिका
सिलिका फ्यूम एक अल्ट्रा-फाइन, नानो साइज पाउडर हो जुन माइक्रो-सिलिकाको रूपमा पनि चिनिन्छ। सिलिका फ्यूम फोमेड सिलिकाको साथ भ्रमित हुनु हुँदैन। उत्पादन प्रक्रिया, कण मोर्फोलोजी र सिलिका फ्यूमको प्रयोगको क्षेत्रहरू फ्युमेड सिलिका भन्दा फरक छन्। सिलिका फ्यूम एक अनाकार, क्रिस्टल, SiO2 को बहुरूप फाराम हो। सिलिका फ्यूममा गोलाकार कण हुन्छ र औसत कण व्यास १ 150० एनएमको हुन्छ। सिलिका फ्यूमको सबैभन्दा प्रख्यात अनुप्रयोग उच्च प्रदर्शन क concrete्क्रीटको लागि पोजोलनिक सामग्रीको रूपमा छ। यो पोर्टलैंड सिमेन्ट क concrete्क्रीटमा थपिएको छ क concrete्क्रीट गुणहरू सुधार गर्न, जस्तै कम्प्रेसिभ शक्ति, बन्धन शक्ति, र घर्षण प्रतिरोध। त्यस पछाडि, सिलिका फ्यूमले क्लोराइड आयनहरूमा कंक्रीटको पारगम्यता कम गर्दछ। यसले कंक्रीटको प्रबलित इस्पातलाई क्षयबाट बचाउँछ।
सिमेन्ट र सिलिका फोमको अल्ट्रासोनिक मिश्रणको बारेमा थप जान्नको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
सिलिका फ्यूम सीएएस नम्बर: 90 12 ०१२-64-2-२, सिलिका फ्यूम EINECS संख्या: २33-761११
प्रेसिपेटेड सिलिका सेतो पाउडररी सिंथेटिक एमोर्फस सीओ २ को रूप हो। प्रेसिपेटेड सिलिकालाई फिलर, सफ्टनर वा प्रदर्शन सुधारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ प्लास्टिक वा रबरमा, उदाहरणका लागि टायरहरू। अन्य प्रयोगहरूमा टूथपेस्टमा सफाई, मोटो पार्नु वा पॉलिश गर्ने एजेन्ट समावेश छ।
टुथपेस्ट निर्माणमा अल्ट्रासोनिक मिश्रणको बारेमा थप जान्नको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
फ्युमेड सिलिकाको प्राथमिक कणहरू and र १०० एनएमको व्यास हुन्छ, जबकि एग्लोमेरेट आकार size० µm सम्मको हुन्छ र औसत पोयर आकार 30० एनएम भन्दा ठूलो हुन्छ। पायरोजेनिक सिलिका जस्तै, प्रेसिडेटेड सिलिका अनिवार्य रूपमा माइक्रोपर्स हुँदैन।
फ्युमेटेड सिलिका सिलिकेट लवणको समाधानबाट वर्षा द्वारा उत्पादित हुन्छ। एक खनिज एसिडको साथ तटस्थ सिलिकेट समाधानको प्रतिक्रिया पछि, गन्धक एसिड र सोडियम सिलिकेट समाधान पानीमा अल्ट्रासोनिक आन्दोलन जस्ता आन्दोलनको साथ एकै ठाउँमा थपिन्छ। सिलिका एसिडिक अवस्थाहरूमा अवक्षेपण गर्दछ। वर्षाको अवधि, प्रतिक्रियाकर्ताको थप दर, तापक्रम र एकाग्रता, र pH को रूपमा कारकहरू बाहेक, आन्दोलनको विधि र तीव्रताले सिलिकाका विशेषताहरू भिन्न हुन सक्दछ। एक अल्ट्रासोनिक रिएक्टर कक्षमा Sonomechanical आन्दोलन लगातार र समान कण आकार उत्पादन गर्न एक प्रभावी विधि हो। उन्नत तापमानमा अल्ट्रासोनिक आन्दोलनले जेल चरणको गठनलाई बेवास्ता गर्दछ।
नानोमेटेरियल्सको अल्ट्रासोनसली सहयोगी वर्षाको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, जस्तै सिर्का प्रेसिडेटेड, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
प्रेसिटेड सिलिका सीएएस नम्बर: 63631१-86--।
कोलोइडल सिलिका / सिलिका कोलोइड
कोलोइडल सिलिका तरल चरणमा फाइन ननपोरस, अनाकार, प्रायः गोलाकार सिलिका कणहरूको निलम्बन हो।
सिलिका कोलोइड्सको सामान्य प्रयोग पेपरमेकिंगमा ड्रेनेज एड, सिलिकॉन वेफर पॉलिशिंगको लागि घर्षण, रासायनिक प्रक्रियाहरूमा उत्प्रेरक, नमी शोषक, घर्षण प्रतिरोधात्मक कोटिंग्समा थप्नको लागि, वा फ्लोक्कुलेटिंग, कोगुलेटिंग, फैलाव वा स्थिरिकरणको लागि सर्फ्याक्टन्ट हो।
घर्षण प्रतिरोध पॉलिमर कोटिंग्समा कोलोइडल सिलिकाको बारेमा अधिक जान्नको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
कोलोइडल सिलिकाको उत्पादन एक बहु-चरण प्रक्रिया हो। क्षार-सिलिकेट समाधानको आंशिक तटस्थताले सिलिका न्यूक्लीको गठन गर्दछ। कोलोइडल सिलिका कणहरूको सबुनिटहरू सामान्यतया १ र between एनएम बीचको दायरामा हुन्छन्। पोलीमराइजेशनको सर्तमा निर्भर गर्दै यी सबुनिटहरू सँगै जोडिन सकिन्छ। Below मुनिको पीएच घटाउँदा वा नुन थपेर युनिट्सले चेनमा सँगै फ्यूज गर्दछ, जसलाई प्रायः सिलिका जेल भनिन्छ। अन्यथा, subunits अलग रहन र बिस्तारै बढ्न। नतिजा उत्पादनहरु अक्सर सिलिका sols वा precipmitted सिलिका भनिन्छ। एक कोलोइडल सिलिका निलम्बन पीएच समायोजनद्वारा स्थिर हुन्छ र त्यसपछि केन्द्रित हुन्छ, उदाहरणका लागि वाष्पीकरणबाट।
सोल-जेल प्रक्रियाहरूमा सोनोमेकेनिकल प्रभावहरूको बारेमा थप जान्न, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
सुख्खा वा वायुजन्य क्रिस्टल सिलिकॉन डाइअक्साइड मानव फोक्सोको कार्सिनोजेन हो जसले फोक्सोको गम्भीर रोग, फोक्सोको क्यान्सर वा प्रणालीगत स्वत: प्रतिरक्षा रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। जब सिलिका धुलोले सास फेर्छ र फोक्सोमा प्रवेश गर्दछ यसले दाग टिशूको गठन गर्दछ र फोक्सोलाई अक्सिजन (सिलिकोसिस) लिनको क्षमता कम गर्दछ। गीला र सिओ २ लाई तरल चरणमा फैलाउँदछ, जस्तै अल्ट्रासोनिक होमोजाइनेजेशनले, इनहेलेसनको जोखिम हटाउँछ। त्यसैले एक तरल उत्पादनको जोखिममा SiO2 समावेश सिलिकोसिसको कारण धेरै कम छ। कृपया सुक्खा पाउडरको रूपमा सिलिका ह्याण्डल गर्दा उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्!
सिलिका पछि sonication